I-Samsung Galaxy A70 ngoku isemthethweni: iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy A70 ngoku isemthethweni: iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba ubungakanani bekhusi lee-smartphones buyeyona nto iphambili kubasebenzisi: kukhulu okulunge ngakumbi. Ukongeza, enkosi kwinkqubela phambili kwitekhnoloji yokuvelisa isikrini, sinokufumana ukusikwa okuncinci kuzo ukuze sikwazi ukwandisa umlinganiso wescreen.
Isamsung yenye yezinto ezihamba phambili ekubonakaliseni abavelisi umenzi ophambili weepaneli kuzo zombini iApple kunye neXiaomi kunye neHuawei. Imodeli yamva nje eyenziwe yinkampani yaseKorea yi-Galaxy A70, isiginali enescreen esikhulu, ikhamera kathathu kunye nokuzimela okumangalisayo okwenzelwe ukwabelana ngeyona mizuzu mihle.
1 Isikrini sonke
2 Iikhamera ezintathu zokufota yonke into
3 Inkqubo ye-8-core Exynos
4 Imibala yeGalaxy A70
5 Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy A70
6 Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-Samsung Galaxy A70
Isikrini seGalaxy A70 sihlobo lwe-Infinity-U, oko kukuthi, ukuhla kwamanzi kwindawo ephezulu yesikrini, kunye isinika 6,7 intshi, ukuba yeyona inkulu esinokuthi siyifumane okwangoku ngaphakathi kwe-Samsung ecosystem. Ifomathi yescreen ingama-20: 9 kwaye isinika amava okuntywila aphezulu kakhulu.
Iikhamera ezintathu zokufota yonke into
Icandelo lokufota liye laba yinto ephambili kubo bonke abasebenzisi xa behlaziya izixhobo zabo, kuba sesona sixhobo siphambili abasisebenzisa mihla le, nakwiminyhadala yabo ekhethekileyo. I-Galaxy A70 yenziwe ngeekhamera ezintathu: eyintloko ibonelela ngesisombululo sama-32 mpx, i-engile ebanzi engaphezulu ifikelela kwi-8 mpx kunye nobunzulu (ukwenza isiphumo sokukhanya) sifikelela kwi-5 mpx. Ikhamera engaphambili ikwasinika isisombululo esifanayo nekhamera ephambili engasemva: 32 mpx.
Inkqubo ye-8-core Exynos
Ukubheja i-Samsung kwiprosesa ye-8-core Exynos, ezimbini kwi-2 GHz nezintandathu kwi-1,7 GHz.Le processor ihamba ne-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina ngaphakathi, indawo esinokwandisa ngayo ngokusebenzisa amakhadi e-SD amancinci ukuya kuthi ga kwi-512 GB. Iqela liphela ilawulwa yi-Android 9.0.
Ukulawula ibhetri ye-6,7-intshi, sinazo I-4.500 mAh ibhetri ngenkxaso ekhawulezileyo yokuhlawula. Ukukhusela ukufikelela kwesi sixhobo, i-Samsung isinika iscreen sensor yeminwe kunye nokubonwa kobuso kwe-2D.
Imibala yeGalaxy A70
I-Samsung Galaxy A70 ifumaneka ngemibala emine: Ikorale, luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama namhlophe kunye neziphumo zegradient ezahlukileyo ngokokukhanya okuwela phezu komhlaba.
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy A70
Isikrini I-6.7 intshi FHD-Super AMPLED -Umboniso we-infinity-U
Cámara trasera I-32 mpx ephambili-8 mpx f / 2.2 i-engile ebanzi-5 mpx f / 2.2 ubunzulu
Ikhamera yangaphambili 32 mpx ngokuvula f / 2.0
Ubukhulu 164.3 x 76.7 x 7.9mm
Inkqubo I-Octa-Core- (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz)
Memoria I-6 GB RAM
Ukugcina I-128 GB iyandiswa kusetyenziswa amakhadi e-MicroSD.
Ibhetri I-4.500 mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza okukhulu
Khu seleko Iscreen sensor yeminwe-ukuqondwa kobuso
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-Samsung Galaxy A70
Okwangoku, i-Samsung khange azise malunga nokufumaneka okanye ixabiso ukuba banolu hlobo lutsha kwaye basimema ukuba siqwalasele lo msitho uzakubanjwa ngomhla we-10 ku-Epreli apho uzakunikezelwa ngokusesikweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Samsung Galaxy A70 ngoku isemthethweni: iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka
Moto G7 uphonononge ividiyo, isiphelo esihle se-Android apho ukubuyela umva ibhetri yayo